Waa Tuma Umuliso Dhaqameed? Maxaase Afka Qalaad Lagu Yiraahdaa? - Diblomaasi
Waa Tuma Umuliso Dhaqameed? Maxaase Afka Qalaad Lagu Yiraahdaa?
Ilhaan Ciise Maxamed
TBA waxaa laga soogaabshay Traditional Birth Attendent oo loola jeedo umuliso dhaqameed.
Umulisooyinka waxa ay kamid yihiin dadka loogu baahi badan yahay dhanka caafimaadka,
Goobaha caafimaadka ayaa aad uyar, inta hadda shaqeysana badankoodu malahan qalabkii loo baahnaa. Sida saxda ah Dalkeena malahan adeeg caafimaad oo xirfadleh kaas oo hoostaga Dowlad, dalka oo idil gaarsiin karta.
Waa Tuma Umuliso Dhaqameed?
Waa qof ka shaqeeya goob caafimaad gaar ahaan kuwo lagu dhalo laakiin aanan lahayn wax cilmi ah oo ku aaddan shaqadaas, xirfad xumadaas waxa ey keentaa ama sababtaa in Malaayiin hooyooyin ah ey udhintaan dhibaatooyin kasoo gaaray xirfadd xumadaas.
Umuliso dhaqameedka waxaa kaloo lagu tilmaamaa in ey yihiin dad aan aqoon iyo xirfad toona lahayn, ma’oga qalab nadiif ah in loo baahanyahay. Sakiimaha ey hooyada iyo canuga u isticmaaleyso si ey xundurta uga jarto ma’ahan nadiif.
Hadii ey hooyadu dhiig baxayso maheystaan wax dhiig joojin ah iyo daawooyin kale oo loobaahanyahay. Waa umuliso dhaqameedka intabadan dalkeenna ka howlgala, wey jiraan qaar kudadaalauy in ey aqoon iyo xirfad fiican yeeshaan.
Heyadda Caafimaadka Adduunka “WHO”-Somalia bishii Maarso 2017 waxa ey sheegeen: “100,000 ‘boqolkii kunba waxaa dhinta 732 haween ah oo u dhinta dhibaatooyin laxiriira dhalmada iyo inta ey uurka leeyihiin”.
Waxa aan aamminsanahay in dhibaatadaan ey qeyb katahay xirfad xumada caafimaad ee kajirta dalkeenna, waxa ugu badan ee hooyooyinka udhintaan waxaa kamid ah:
Dhiig-bax: tiro hooyooyin ah ayaa udhinta dhiig bax dalkeena. Waana wax laga hortagi karo.
Ekfishin: waa xanuun caadi ka’ah dumarkeenna aktiisa, haddii dhammaantood lawareystana wey kadacwoon lahaayeen.
Isku-guur:hooyada oo aan dhali karin canuga in lagu qalo maahane, in ey ku madax adeegaan waayeelka u taliya in ladhalin karo, taasina ey keento in hooyada iyo cunugeeda isku dhintaan.
Dhiig-baxa kuyimaada hooyada dhalmada kaddib:Waxaa lagu qiyaasaa marki ey hooyada lumiso500 oo Ml oo dhig ah, dhiig baxaanna waa midka kaliya ee sababa intabadan dhimashada hooyooyinka ee adduunka kunool.(World Wide). Dhiig baxaan in uu yimaad waxaa keeni kara:
In cadad yar-yar looga soo dhaxtago Minka:taas waxa ey keeneysaa in minka furnaado afkiisana uu isku dhagi waayo.
In minka xagattin gaarto, waxaa aad u halis ah in minka xagatin gaarto iyada oo aan la’ogeyn dhiig buxuna uu sidaad kubillowdo.
Minka oo aruur sami waayo waxaa looyaqaan “uterine atony”, sidookale xaaladdaan waa xaaladaha ugu qatarsan ee keena dhiig-baxa hooyada, xaladdaan waxaa laga yaabaa ama ey udhowdahay in minka laga saaro hooyada.
Ekfishin:intabadan waxaa sababo ilmo aragto looyaqaan bakteeriya, taas oo ku abuuranta xubinta taranka waxa eyna usii gudubtaa miskaha illaa ilmo galeenka. Haddii aan dhaqso ladaaweyn waxaa kadhalan kara in hooyadu ilmo dhali weydo(infertility),in dhicis uu kudhaco iyo in uu kudaba dheeraado xanuunka.
Iklaamsiyo(Eclampsia):-waa xanuun kuyimaada hooyada inta ey uurka leedahay. Waxaana keena intabadan dhiig-kar kuyimaada uurka. Waxaa hooyada lagu arkaa jarees,lugo barar, miir la’aan iyo carrabka oo laqaniino.
F.G:Dhammaan caqabadahaan waa kuwo laxallinkaro haddii lahelo xirfadlayaal caafimaad oo dhammeystiran.
Sidookale waxaa muhiim ah in hooyada ey ilaaliso caafimaadkeeda lana yeelato xiriir joogto ah xarumaha caafimaadka, waxa ey kasaacida yaan in ey ogaato heerkeeda caafimaad iyo xanuunada ey halista ugu jirto.
Farqiga U Dhaxeeya Umuliso Dhaqameedka Iyo Kuwa Xirfadda Leh:
No. Umuliso Dhaqameedka Umulisada Xirfadda Leh
Maheysato qalab nadiif ah. Waxa ey heysataa qalab nadiif ah.
Malahan aqoon ey ku ogaan karto xaaladdaada in ey qatar tahay iyo inkale. Waxa ey leedahay aqoon ey ku ogaan karto xaaladdaada in ey qatar tahay iyo inkale.
Magarankarto daawada aad ubbaahantahay Waxa ey garan kartaa daawada aad ubbaahantahay
Maqaadan karto go’aan haddii xaaladdu cuslaato. Waxa ey qaadan kartaa go’aan haddii xaaladdu cuslaato.
Magaran karto in ilmahaagu caadi udhalan karo iyo inkale. Waxa ey garan kartaa in ilmahaagu caadi udhalan karo iyo inkale.
Waxaa macquul ah in aad isku furanto haddii uu ku dhaliyo qof aan xirfad fiican lahayn uukudhaliyo Waxa aad 99% kabadbaadi kartaa isku furanka.
Haddii uu ilmahaaga naqas kuxirmo marki uu dhasho, maheystaan qalabka naqaska(Oxygen machine),wuxuu halis uyahay dhimasho. Haddii uu ilmahaaga naqas kuxirmo marki uu dhasho, waxa ey heystaan qalabka naqaska(Oxygen machine), wuxa ey ubadantahay in uu badbaado ilmahaaga.
Haddii dhiig bax kugu yimaado, magarankaraan meel ey wax kabillaabaan, waxaad 99% halis ugu jirtaa dhimasho. Haddii dhiig bax kugu yimaado, waxaa fududaaneyso in lagula tacaalo.
F.G: Umuliso xirfadleh ma’ahan haddii laga waayo tilmaamahaas, xittaa haku sugnaato xarun caafimaad.
Related Topics:Waa Tuma Umuliso Dhaqameed? Maxaase Afka Qalaad Lagu Yiraahdaa?
10 Faa’ido oo Laga Helo Biyo Badan oo La Cabo
Waa qoraa ka tirsan Somalism. Waxa ay wax ka qortaa arimaha bulshada, dhaqanka iyo caafimaadka, waxay aad ugu xeel-dheertahay qorista afka hooyo. Sidoo kale waxay taqasusna u leedahay kuliyada kalkaalisanimada, waxay shahaadada heerka koowaad ee jamacada (bachelor degree) ka haysataa kuliyada kalkaalisanimo.